Larizza de Vera Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Larizza de Vera
Mumakore mashoma apfuura, pange paine shanduko huru munzira yatinoshandisa nayo internet kushambadzira kwedigital. Takatanga kubva kungogadzira webhusaiti kusvika ikozvino kusunga data uye mushandisi chiitiko. Nemakwikwi makukutu munzvimbo yedhijitari, kuve newebsite hakungori kucheka. Vatengesi veDhijitari vanofanirwa kusimudzira yavo mutambo kuti vagomira munzvimbo yanhasi inogara ichichinja. Kushambadzira munyika yedhijitari kwakasiyana zvakanyanya kubva
Svondo, October 11, 2020 Mugovera, October 10, 2020 Larizza de Vera
Kushambadzira chiitiko chinopfuurira. Kunyangwe iwe uri bhizinesi rebhizinesi kana bhizinesi diki, kushambadzira inzira yakakosha yekuchengetedza mabhizinesi achifamba pamwe nekubatsira kutyaira mabhizinesi mukubudirira. Saka zvakakosha kuchengetedza uye kuchengetedza mukurumbira wechiratidzo chako kuti ugadzire mushambadziro wekushambadzira webhizinesi rako. Asi vasati vauya nehurongwa hwekushambadzira, vatengesi vanofanirwa kunyatsoziva kukosha pamwe neiyo